गर्भवती महिलामा यस्तो समस्या भए हुनसक्छ फिस्टुला, कसरी जोगिने ? « Khabarhub
गर्भवती महिलामा यस्तो समस्या भए हुनसक्छ फिस्टुला, कसरी जोगिने ?
१९ माघ २०७६, आइतबार
महिलाहरुमा फिस्टुलाको समस्या भएमा योनीबाट निरन्तर रुपमा पिसाब वा दिसा चुहिने समस्या हुन्छ । सुत्केरी हुँदा प्रसव व्यथा लामो हुँदा बच्चाको टाउको योनीमार्गमा धेरै समयसम्म रही टाउकोले थिचेको योनीमार्गको भागमा रक्तसञ्चार बन्द हुन्छ । जसले गर्दा रक्तसञ्चार बन्द भएको भागको कमलो मासु मर्छ र त्यहाँ प्वाल पर्छ ।
त्यस्तो प्वाल पिसाब थैली र योनीमार्गको विचमा परेको छ भने योनीमार्गबाट निरन्तर पिसाव चुहिन्छ । यदी प्वाल योनीमार्ग र दिसा थैलीको विचमा छ भने योनीमार्गबाट दिसा चुहिन्छ । कहिलेकाहीँ यस्तो प्वाल दुवै तर्फ हुन्छ । यस्तो अवस्थामा योनीमार्गबाट दिसा र पिसाब दुवै चुहिने समस्या हुन्छ ।
महिलामा किन हुन्छ फिस्टुला ?
महिलाहरुमा फिस्टुला हुनुको मुख्य कारण सुत्केरी गराउँदा १८ घण्टा भन्दा लामो व्यथा लाग्नु र योनीमार्गमा बच्चाको टाउको रहने अवस्था हुनु हो । धेरैजस्तो गर्भवती हुँदा नियमित स्वास्थ्य परीक्षण नगराउने महिलाहरुमा फिस्टुलाको समस्या हुने सम्भावना बढी हुन्छ ।
यसरी हुन्छ उपचार
फिस्टुला निको हुने समस्या हो । फिस्टुलाको उपचार शल्यक्रिया गरेर गरिन्छ । चिकित्सकहरुका अनुसार एक सय जना महिलामा ९५ जना महिलाको फिस्टुलाको समस्या उपचारबाट निको हुने गरेको छ । त्यसैर्ले फिस्टुलाको समस्या भएमा चिकित्ससँग परामर्श लिएर उपचार गर्नुपर्छ ।
फिस्टुला हुन नदिन के गर्ने ?
–कम उमेरमा विवाह नगर्ने,
–कम उमेर बच्चा नजन्माउने,
–बालिका तथा किशोरीलाई सन्तुलित आहार खुवाउने,
–गर्भवती महिलालाई पर्याप्त मात्रामा पोषिलो र सन्तुलित आहार खुवाउने,
– गर्भवती महिलाले नियमित स्वास्थ्य जाँच गराउने,
–सुत्केरी व्यथा लागेमा स्वास्थ्य संस्थामा लैजानले,
–दक्ष चिकित्सक वा स्वास्थ्यमर्कीको सहयोगमा बच्चा जन्माउने ।
प्रकाशित मिति : १९ माघ २०७६, आइतबार ३ : २७ बजे
माओवादी केस बैठक: साङ्गठनिक अराजकता हटाउनेदेखि आगामी योजनासम्म
काठमाडौँ– पटक पटक सर्दै आएको नेकपा (माओवादी केन्द्र)को केन्द्रीय समितिको
बैतडी– बैतडीमा चट्याङ लागेर एक महिला घाइते भएकी छन् ।
बल्खुमा गाडीको ठक्करबाट भारतीय नागरिकको मृत्यु
काठमाडौँ– काठमाडौँको बल्खुमा गाडीको ठक्करबाट भारतीय नागरिकको मृत्यु भएको छ
सात घण्टापछि एकतर्फी सञ्चालनमा आयो दशरथचन्द राजमार्ग
काठमाडौँ– पहिरोले अवरुद्ध बनेको दशरथचन्द राजमार्ग एकतर्फी रूपमा सञ्चालनमा आएको
काँग्रेसले मंगलबार बोलायो पदाधिकारी बैठक
काठमाडौँ– नेपाली कांग्रेसले समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल गर्न पार्टीको पदाधिकारी